Fiaraha-miasa amin’ny Akany Avoko Ambohidratrimo. – filazantsaramada
Fiaraha-miasa amin’ny Akany Avoko Ambohidratrimo.
Publié parfilazantsaramada	 janvier 25, 2012 Laisser un commentaire sur Fiaraha-miasa amin’ny Akany Avoko Ambohidratrimo.
Fiaraha-miombon’antoka Feon’ny Filazantsara/ Lycée Nanisana
Toy ny fanao isan-taona dia fifaninanana baolina kitra eo anivon’ny sekoly no nentin’ny roa tonta manamarika ny fialan-tsasatry ny krismasy. Hoan’ny taom-pialan-tsasatry ny krismasy 2011 moa dia nikarakara “Porte Ouverte” ny Sekoly ho fampahafantarana ireo Club 7 misy eo anivon’ny Sekoly (Club Feon’ny Filazantsara, Club UNESCO, Club GBE, Club Choral, Club Langue Allemande, Club Mpikabary, Club Dessin). Nampitondraina ny lohahevitra “Unité dans la diversité des clubs” io hetsika io izay notanterahina ny 21 Desambra 2011. Koa hoan’ity indray mitoraka ity dia niompana tanteraka tamin’ny fandraisana anjara feno tamin’io « Porte ouverte « io ny fiaraha-miasa.
Nanana efi-trano tsirairay ireo Club nentina nampahafantarana azy ary nasaina nitsidika izany ireo mpampianatra, mpandraraha ary ny mpianatra izay notarihin’ny Atoa Tale sy Rtoa Tale Lefitry ny Sekoly.
Hoan’ny Club Feon’ny Filazantsara (FF) dia fampirantiana an-tsary narahina fanazavana ireo fiaraha-miasa misy eo amin’ny roa tonta nanomboka ny 2007 no natao dia ny : Cours Biblique par Correspondence, Boky Literatiora Kristiana napetraka ao amin’ny trano famakiam-bokin’ny Sekoly, fandefasana Horonan-tsarimihetsika arahina fifanankalozan-kevitra, fifaninanana baolina kitra , fifaninanana Soratra Masina, Tafika Masina an-kira nataon’ny Chorale FF.
Teo koa moa ny fampahafantarana ny Feon’ny Filazantsara sy ireo sehatr’asa iandraiketany. Atoa Ramavoson Felixe, izay mpampianatra eo an-toerana no sady “Volontaire”- ny Feon’ny Filazantsara niaraka tamin’ireo mpianatra mpikambana ao amin’ny Club FF no nanao ny fanazavana sy fanentanana.
Nankasitraka ary nisaotra amin’ny anjara biriky entin’ny FF eo amin’ny fitaizana sy fanabeazana ara-panahy ireo mpianatra Atoa Tale, koa maniry hatrany ny hitohizan’ny fiaraha-miasa. Marihina fa amin’izao fotoana izao dia maherin’ny 250 ireo mpianatra Taona 10 manaraka ny Cours Biblique par Correspondence. Ao ireo mpianatra teo aloha no efa nahavita tanteraka ny fianarany ary maro ireo liana hiroso amin’izany.
Fandefasana horonan-tsarimihetsika arahina fifanakalozan-kevitra no nentin’ny Feon’ny Filazantsara nampita ny hafatry ny Soratra Masina tamin’ireo tanora beazina.
Hoan’ny Akany Avoko Ambohidratrimo, raha somary niato kely ny fandefasana izany horonan-tsarimihetsika izany nohon’ny antony maro dia nitohy hatrany kosa ny fanarahan’ireo tanora ny Cours Biblique par Correspondence.
Koa ny Asabotsy 23 Decembre2011 dia nisy fanolorana “certificat” ireo mpianatra 2 nahavita ny fianarana Soratra Masina. Akoatry ny “ certificat” moa dia nisy koa fanomezana Filazantsara sy kalandrie 2012 nomena azy ireo. Nokendrena indrindra ho nandritry ny fankalazan’ireo tanora sy ankizy beazina ao amin’ny Akany ny Noely no natao ny fanolorana . Fotoana natao indrindra koa hanentanana sy hamporisihina ireo tanora hafa, ireo vahiny nasaina marobe (solon-tenam-panjakana, NGO mpiara-miasa, fianakavian’ny ankizy) mba hiroso koa amin’ny fandalina ny Tenin’Andriamanitra izay omena maimaimpoana hoan’izaymaniry hiroso amin’izany.
Publié parfilazantsaramada janvier 25, 2012 Publié dansUncategorized
Fanatitra toa inona?